သောသီခို: KNU Appoints New Commander
By SAW YAN NAING / THE IRRAWADDY| October 4, 2012
Standing beneath Martyrs Day decorations atajungle base in KNLA Brigade5in 2009, Brig-Gen Baw Kyaw Heh addresses an audience. (PHOTO: Saw Yan Naing/ THE IRRAWADDY)
Posted by ဇင်ယော် at 7:17 AM
you fucking all karen leader should be together do not try to play politic bettwin each other specially zipporah sein eg. (cow-spreated tinger will take it )get expmle of knla sprate into dkba some people know well why? that not good sign. knla already sprated who going to puted together not dkba-not border guard should one KNU that it.think about it
saw win Aung said...
မှန်တိုင်းလဲရိုင်းရိူင်းမပြောသင်.ဘူးKNU စည်းလုံးမှုမရှိဘူး ၀ါးစည်းပြေနေတယ်လေ ကရင်တယောက်အနေနဲခေါင်းဆောင်တစ်ယေက်ကိုပြီးစလွယ်မထုတ်သင်.တာတောအမှန်ပဲgen.မူတူးဆေးကknuမှာနှစ်ပေါင်း၃-၄ဆယ်လောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လာတာကိုကလေးတယောက်အမှားလုပ်တာကိုအမေကသေမတတ်အပြစ်ပေးတာဖြစ်နေတယ် ....သေချာတာကတောknuမကြားခင်ပျက်တောမှာသူများသင်းလျှိုတိုင်းကွဲတာတိလိစ်ဆန်ပဲရှိတယ် America,Englandမှာပညာသင်ထားတဲ.knuခေါင်းဆောင်တွေရှိပါတယ် စဉ်းစားဖို.တောလိုတယ်
ဒါပေမဲ့ ငါစစ်ဦးစီင်္းချုပ် ငါလုပ်ချင်တာငါလုပ်လို့ ရတယ်၊ဘယ်သူမှစောက်ရေး
စိုက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စည်းလွတ်ဝါးလွတ်အချိုးမျိုးတော့လာမလုပ်ပါနဲ့ ။ကေအင်ယူ၊ကေအန်အယ်လ်အေမှာလည်း အဖွဲ့ ဝင်တိုင်းလိုက်နာရမဲ့စည်းကမ်းရှိတယ်။မလိုက်နာရင် အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ စည်းကမ်းကို ဖောက်ဖျက်တာဘဲ၊ပြတ်ပြတ်သားသားအရေးယူရမည်။အေအင်ယူမှာအရင်က ခေါင်းဆောင်တစ်ချို့ ဒီအချိုးမျိုးချိုးခဲ့တာကို ပြတ်ပြတ်
သားသားအရးမယူခဲ့နိုင်လို့ အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပေါင်း
များပြီ။ဒီတစ်ခါအေအင်ယူမှန်တယ်။ပြည်သူတစ်ယောက်နေနဲ့ကျုပ်လက်ခံတယ်။အခုအချိန်က အရေးကြီးတဲ့အချိန်၊ရန်သူက လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ဘို့ကြိုးစားနေတာကိုကိုကနားမလည်၊မထိန်းနိုင်အသိမ်းနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေတာကတော့ တော်တော်ကိုပညာမဲ့လွန်းပါတယ်.ကေအန်ယူ ဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ကိုစားမပြုဘူး၊အဖွဲ့ အစည်းကိုကိုယ်စားမပြုဘူး...ကရင်တစ်မျိူးသားလုံးကိုကို.ယ်စားပြုတာပါ..ဒါကြောင့် ကိုယ်လုပ်ချင်တိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်တာဟာ ကရင်ပြည်သူကိုစော်ကားတာ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကိုစော်ကားတာ၊ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုစော်ကားတာ စောက်ရေးမစိုက်တာ..ဒီလိုလုမျိုးတွေဖြုတ်လိုက်တာတောင်မကြေနပ်ရင်ပြသာနာလိုက်ရှာနိုင်သေးတယ်..အမှန်က အပြတ်ရှင်းပြစ်ရမှာ....ထွီ........